> Resource > Video > Sida loo gaabin clip Video ah
Waxaan leeyahay video dheer. Sida loo soo gaabin?
Waa hagaag, mararka qaarkood aad rabto in aad la hadhid ugu xiisaha badnaa ee video dheer ama aad rabto in wax la mid ah, laakiin in ka badan muddo kala duwan. Si loo xaliyo dhibaatada, in aad sidoo kale jari karaa qaybaha rabin haddii aad rabto video yar, ama wax ka beddelo xawaaraha in ay sii wax la mid ah.
Halkan fudud weli wax ku ool ah qaylqaylin video tafatir ah Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waxaa loo soo bandhigay. Waxay kuu siinayaa hab fudud oo soo afjarin videos iyo sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa videos siyaabo badan oo kala duwan. Download barnaamijkan hadda oo ay bartaan sidii ay u soo gaabin video clip ah la isticmaalayo hage fudud tallaabo-tallaabo hoos ku qoran.
1 dejinta file video aad rabto inaad Gaabisaan
Ku rakib iyo furi barnaamijka. Riix ah "Import" button in lagu daro aad file video ama si toos ah jiidi oo hoos barnaamijka. Markaasuu ku rid in waqtiga Video for tafatir ah.
2 Goo qayb aan la rabin ee aad video
Dhaqaaq bar slider iyo joojiyo ee meesha aad rabto in aad bilowdo goynta. Riix ah "Split" icon in toolbar ka. Markaasay aad video oo waa la gooyay. Haddii aad rabto in aad tirtirto mid ka mid ah qeybo ka keentay, riix "Delete" button. Ku celi tallaabadaan ilaa aad ka jaray oo dhan qayb aan la rabin ama video clip gaaban oo ku filan.
3 beddel xawaaraha aad video
Haddii aad rabto in aad sii video content isla kaliya muddo kala duwan, bedesho xawaaraha. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay footage ah 2 daqiiqo iyo rabto in aad u aragto in 1 daqiiqo, bedesho xawaaraha 200%. Si tan loo sameeyo, double guji video bartilmaameedka, kadibna bar xawaaraha inay xaq u leeyihiin inay kordhiyaan xawaaraha aad video. Guji "OK" si loo xaqiijiyo in aad goob.
4 dhoofinta aad video
Play video si aad u aragto haddii aad ku qanacsan tahay. Markaas riix "Abuur" button oo uu ka soo xusho fursadaha la heli karo: badbaadin sida file video ah, gubi in DVD, geliyaan si ay u YouTube ama Facebook, ama beddelid u arkaysid ee telefoonka gacanta ama kiniin.
Si loo badbaadiyo file cusub sida file video ah, tag "Qaabka" tab iyo doortaan qaab video kasta, oo ay ku jiraan AVI, MPEG, wmv, MP4, FLV, MOV, iyo in ka badan sida aad u jeceshahay. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo u qalab mobile, bedesho ah "Device" tab iyo doorasho horena ugu soo saarka ku haboon in suuqa kala pop-up iyo riix "Abuur". Marka file la badbaadiyey, guji "Hel Target" iyo galka ay ku jiraan video gaabin furi doonaa.
TP magaabay: Sida loo jar TP Files aan loo gaysto Quality
3GP magaabay: Sida loo jar 3GP Files
H.264 magaabay: Sida loo jar H.264 Files
Sida loo sameeyo ah Logo dhaceen in ka dib Raadka
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka Motorola Droid Razr
Sida loo Guba Nikon Videos in DVDs